Izindaba - Ukusebenza nezinzuzo zephepha le-PE plastic tube
Ukusebenza kanye nezinzuzo zephepha le-PE plastic tube
Ukusebenza nezinzuzo ze Ishubhu lepulasitiki le-PE ukupakisha
Ukusebenza nezinzuzo ze Ishubhu lepulasitiki le-PE ukupakisha: ukubumba okuphezulu okuncane, ukubhala phezulu okuncane, ukufaka amahlombe, ukufafaza kwangaphakathi okuningi, ukuphrinta umbala nobunye ubuchwepheshe. Ukupakisha kwe-PE plastic tube cosmetic imikhiqizo yenkampani 0ur IShanghai Rainbow Industrial Co, Ltd. unayo
Kuphephile, kuhlanzekile, kuyamelana nokugqwala, kubukeka kahle, kulula ukuyisebenzisa futhi kuyayilimaza imvelo. Ishubhu lepulasitiki le-PE ukupakisha kusetshenziswa kakhulu kwezokwelapha, izimonyo, amakhemikhali ansuku zonke, ukudla nezinye izimboni.
Kunezinhlobo eziningi zokupakishwa kwamashubhu epulasitiki e-PE, ikakhulukazi izimonyo zabesifazane. Ngokuncintisana okuya ngokuya kuba namandla emakethe yezimonyo, izinkampane ezahlukahlukene zezimonyo nezinkampani zezimonyo zilwela ukwandisa ukuthengiswa kwemikhiqizo yazo.
IShanghai Rainbow Industrial Co, Ltd wenze imizamo emikhulu ekupakisheni nasekukhuthazeni izimonyo.
Imisebenzi nemisebenzi ye- Ishubhu lepulasitiki le-PEukupakisha kuya ngokuya kucwengwa ngokwengeziwe, futhi kunezimonyo ezigcwala ngokugcwele, umehluko kumamaki usobala, namafomu okupakisha ayakhazimula; ngasikhathi sinye, ukuze ukwazi ukuzazisa kangcono
Okwemikhiqizo yabo, Iphakethe le-RB ihlukanisa futhi ifake izimonyo ngendlela ehlukile ukuze ivumelane shanghai uthingo iphakethe izici zakho.
I-PE plastic tube package inamagama amaningi nemisebenzi ehlukile, kepha ngokuya ngokuma kwayo nokufakwa kwayo emaphaketheni, kukhona ikakhulukazi lezi zigaba ezilandelayo: izimonyo eziqinile, izinhlayiya eziqinile (impuphu) izimonyo, izimonyo zamanzi nezokugcoba, izimonyo zokhilimu, njll.
1. I-PE plastic tube package iqeda ingxenye yomoya (i-oxygen) esitsheni sokupakisha, engavimbela ngempumelelo ukonakala kokudla.
2. Ukupakisha kwethubhu le-PE isebenzisa izinto zokupakisha ezinezici ezinhle kakhulu zokuvimbela (ukuqina komoya), ubuchwepheshe bokubekwa uphawu kanye nezidingo eziqinile, ezingavimba ngempumelelo ukushintshaniswa kwezinto ezisemaphaketheni futhi zivikele ukwehla kwesisindo sokudla
Ukunganambitheki kokunganakwa nokuvikela ukungcoliswa kwesibili.
3. Ugesi osesitsheni se-PE plastic tube package usukhishiwe, okusheshisa ukudluliswa kokushisa, kungathuthukisa ukusebenza kahle kwenzalo yokushisa, futhi kugweme ukunwetshwa kwegesi ngesikhathi senqubo yokuvala inzalo ukushisa isitsha sokupakisha
Embonini yokudla, i-PE ishubhu lepulasitikiukupakisha kusetshenziswa kabanzi, njengezinyawo zezinkukhu, i-ham, amasoseji, njll .; amapayipi wezimonyo asetshenziswa kakhulu kuma-pickle, imikhiqizo yesoya, izithelo ezilondoloziwe neminye imikhiqizo ekhethiwe. Ipulasitiki le-PE Impilo yeshalofu yokudla emaphaketheni we-hose yandisa kakhulu impilo yeshalofu yokudla.